Munamato kuSakaramende Yakaropafadzwa. ? yekunamata, Kukumbira Chishamiso uye Rumbidzo
Kunamata kune Vakaropafadzwa Iro liturgy iro mukutenda kwechiKaturike rinowanzoita. Vatendi vese vanofanira kuziva minamato iyi kuti vakwanise kuzviita pese pataida.
Rangarira kuti minamato chinhu chatinogona kushandisa pese patinonzwa kuda, hatifanirwe kuzviita tisina kutenda asi asi nekunzwa chaiko mumoyo yedu kuti zvatiri kuita chiitiko chekunamata uye nekudaro zvinofanirwa kutorwa zvakadzama. .
Munamato uyu unoitwa, nguva zhinji kubhadhara kunamatira kuna She wedu Jesu Kristu, uchiziva chibayiro chaakaitira kuitira vanhu pamuchinjiko weKarivhari.
1 Munamato kune Wetsvenetsvene Maitiro ekunyengetera?
2 1) Minamato yekushongedza yetsvenetsvene
3 2) Munamato kune dzvenetsvene kubvunza chishamiso
4 3) Minamato yekurumbidza sakaramende rinoyera kwazvo
5 4) Munamato kune Tsvene Tsvene usati warara
5.1 Ndiani mutsvenetsvene?
5.2 Ndingagona kubatidza kenduru pandinonyengetera munyengetero kune dzinoyera kutsvene here?
Munamato kune Wetsvenetsvene Maitiro ekunyengetera?
1) Minamato yekushongedza yetsvenetsvene
«Baba Vokusingaperi, ndinokutendai nekuti Imi infinito Rudo rwakandiponesa, kunyangwe ndisingade zvangu. Ndinokutendai, Baba vangu, nekushivirira Kwenyu kwakandimirira. Ndinokutendai, Mwari wangu, netsitsi dzenyu dzisingayereki dzakandinzwira tsitsi. Mubairo wega wandinogona kukupa iwe kudzosera zvese izvo zvawakandipa ihwo hurema hwangu, kurwadziwa kwangu nekutambudzika kwangu.
Ini ndiri pamberi pako, iwe Mudzimu werudo, kuti uri moto usingadzoreke uye ndinoda kuramba ndiri muhumwe hwako hwakanaka, ndinoda kugadzirisa zvikanganiso zvangu, ndivandudze moyo wangu mukuzvinatsa kwangu uye nekukupa rukudzo rwangu rwerumbidzo uye yekushongedza.
Jesu wakaropafadzwa, ndiri pamberi pako uye ndinoda kutora moyo usingaverengeke kubva pamoyo wako unoyera, ndinotenda kwandiri uye nemweya yese, kuChechi Tsvene, vapristi vako uye vanonamata. Bvumidza, O Jesu, kuti maawa aya ari maawa echokwadi eushamwari, maawa erudo andakapiwa kuti ndigamuchire zvigaro zvese izvo zveMoyo Wako wakandichengetera.
Mhandara Maria, Amai vaMwari naAmai vangu, Ini ndinobatana newe uye ndinokumbira iwe kuti ugoverane mukunzwa kweMwoyo Wako Unofa.
Mwari wangu! Ndinotenda, ndinodada, ndinovimba uye ndinokuda. Ini ndinokumbira ruregerero kune avo vasingatendi, vasinganamate, usamirire uye vasingakude.
Utatu Hutsvene-tsvene, Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, ndinokunamatirai zvakanyanya uye ndinokupai imi Muviri wakakosha, Ropa, Mweya uye Humwari hwaIshe Wedu Jesu Kristu, aripo muTabhenakeri dzese dzepasi, mukubhadharira kutsamwa kwese, zvibairo uye kusava nehanya kwaanogumburwa nazvo iye. Uye kubudikidza nekukodzera kusingaperi kweMoyo wavo Unoyera Zvikuru uye wemuMweya Mutsvene waMaria, ndinokukumbira kuti utendeuke vatadzi varombo. "
Munamato wekunamatira kune chitsvenetsvene inoratidza kuzvipira kwakazara kunobva pamoyoIchi ndicho chikonzero munyengetero uyu wakakosha kwazvo nekuti mariri hatizenge tichikumbira chero chinhu chakakosha asi isu tinenge tave kungoisa moyo yedu kune iye unofanirwa nemoyo unoshungurudzika uye wakanyadziswa sezvakadzidziswa mushoko ra Mwari.
Ushamwari, icho chinoitwa kubva pamoyo uye nemoyo wose chombo chine simba kwazvo mumunda wemweya.
2) Munamato kune dzvenetsvene kubvunza chishamiso
«Baba Vatsvene Vokudenga
Tinokutendai, kutanga kwezvose
Zvechibayiro cherudo chawakagadzira, nekufira zvivi zvedu
Ndokusaka ini ndikuziva iwe, saIshe wangu, uye iye Muponesi chete
Nhasi ndinoda kuisa Baba vangu vandinoda pamberi pako, hupenyu hwangu
Iwe unoziva zvandiri kupfuura nezviri, uye zvandinozvininipisa pamberi pako
Baba izwi renyu rinoti nemaronda ako takapora
Uye ndinoda kuronga vimbiso iyi, kuti mugondiporesa
Ishe ndinokumbira kuti muve mumaoko evanyanzvi vane nyaya yangu
Kuti iwe unomupa iye madikanwa mazano kuti vakwanise kundibatsira
Kana kuri kuda kwako kutsvene Baba
Isa ruoko rwako rwekuporesa pamusoro pangu, uye rinatsa muviri wangu kubva kune zvese tsvina
Bvisa kurwara kwese kubva kune rimwe nerimwe remasero angu
Uye dzosa kupora kwangu
Ndinokubvunza iwe, Baba Vatsvene
Rumbidzai imi munzeve imi
Nesimba renyu rehumwari rinowana nyasha pamberi pangu
Ndine chivimbo chekuti makanzwa minamato yangu
Uye zvechokwadi, urikushanda kurapa mandiri
Kuda kwenyu kuitwe Vanodiwa Baba
Iwe unoda kuvepo kwaMwari muhupenyu hwako here? Ipapo iwe unofanirwa kunamatira Wakawanda Unoyera Munyengetero kukumbira chishamiso.
Munamato uyu uchakubatsira iwe kuita chishamiso. Kungave kuri nyore kana kuoma, munamato unongoshanda.
Namata uine kutenda kukuru mumoyo mako uye ugare uchitenda musimba raMwari Mwari wedu.
3) Minamato yekurumbidza sakaramende rinoyera kwazvo
«Ini ndinogashira nhasi iwo mwenje, rugare nerunyoro
Kubva kuna iye wakaropafadzwa matenga ese;
Ini ndinogashira Jesu muviri nemweya
Kuti hupenyu hwangu huve nokuzadzwa nekutenda, kusuwa, mufaro,
Charisma uye kugadzikana usati washanya;
Ndinogara ndakadzika mukati mangu
Ndinobata kutenda kutsvene kunonditendera
Gara uchifambiswa panguva dzekutambudzika;
Ndinofarira kufara kwekambani yokudenga
Pamberi porwendo rwehupenyu hwangu izvi
Iyo yakaputirwa neiyotsvenetsvene.
Ini ndinotora saramende iyi mumweya mangu
Uye ini ndinoigamuchira netsitsi, mutsa uye rudo.
Runyararo rwemweya ngaruve nesu tese
Uye kuti chidzitiro cherima chinobuda kana
Kutenda kwangu kunoita chitarisiko.
Iva nekutenda mumunamato uyu kurumbidza sakaramendi dzvene kwazvo dzeatari.
Kurumbidzwa kukwidziridzwa kunoitwa kubva pamoyo uye neruzivo rwekuziva kuti hakuna mumwe akafanana nemunhu iyeye. Panguva ino tiri kupa rumbidzo kuna Ishe, mambo wemadzimambo akazvipa nekuda kwerudo. Kuti akatsungirira kurwadziwa uye kunyadziswa kuti isu nhasi tinakidzwe nerusununguko rwechokwadi maari.
Rumbidzo chikamu chakakosha cheminamato yemazuva ese yatisingakwanise kufuratira nekuti tinofanira kugara tichiziva simba raIshe muhupenyu hwedu.
4) Munamato kune Tsvene Tsvene usati warara
«Ah Mwari Jesu! kuti panguva yehusiku iwe uri wakasurukirwa mumatabhera mazhinji epasi, pasina kana chimwe chezvisikwa zvako chiri kuzoshanya nekukunamatira.
Ini ndinokupa iwe wangu wakaipa moyo, ndichivimba kuti kwese kurova kwayo kwakawandisa sekuda nekunamata. Imi, Ishe, munogara makamuka pasi pemhando yeSakaramende, rudo rwenyu rwerudo harumbofi rwakarara kana matai ekutarisa vatadzi.
Jesu ane rudo Jesu, O Jesu akasurukirwa! Ita moyo wangu sewenje unopfuta; Mune rudo ngavazvidzwe uye ugare uchipisa murudo rwako. Tarisa uone! mwari mukuru!
Tarisa uone nyika inosiririsa, yevapirisiti, yemweya yakatsaurwa, yakarasika, yevarombo varwara, avo husiku husingagumi vanoda simba rako uye nyaradzo yako, kune kufa uye kune uyu muranda wako anozvinhurira anosevenza iwe kuzorora asi asina kutama kure kubva kwaWe, kubva kuTabhenekeri yako ... kwaunogara uri wega uye wakanyarara husiku.
Dai Mutsvene Mutsvene waJesu ugare wakaropafadzwa, kurumbidzwa, kunamatwa, kudiwa nekuremekedzwa mumaTebhenekeri ese epasi. Ameni.
Uyu munamato kuSakaramende Yakaropafadzwa uye Sakaramende Yakaropafadzwa usati warara ndeimwe yeane simba kupfuura ese.
Usati warara zvakakosha kuti uite imwe munamato kana namata kune inoera Tsvene yakakosha kutibatsira kuzorora mukugadzikana kwakakwana. Kumutsa munamato kune chitsvenetsvenetsvene usati waenda kunorara chinhu chatinofanira kuita zuva nezuva uye kunyangwe, kuwedzeredza tsika iyi kuvana kunokosha zvikuru.
Muchechi yeKaturike uyu ndiwo mumwe weminamato yakakosha sezvo uchisimbisa kutenda kwechiKristu uye kusimbisa mweya.
Munamato wa kuonekwa, kurumbidza y Namata Jesu uye chibayiro chake chevanhu. Isu tinoziva kuti minamato inogara ichiunzira hupenyu hwedu nekuti kubudikidza narwo tinokusimbisa uye nekukuzadzai nerunyararo, ndosaka kuve nehupenyu hwekudyidzana naIshe kunokosha.
Sakaramendi rinoyera zvakanyanya chiito chekutenda chinoitwa muchechi yeKatorike kwatinogamuchira nekugamuchira chibayiro chaIshe Jesu Kristu. Ichi chiitiko chinowanzoitwa neChitatu chesvondo yemwedzi wega wega apo chinofumurwa kuitira kuti vatendi vasimudze kunamata kwavo.
Wakagadzwa mucherechedzo mucherechedzo wemuviri wa Kristu wakadzvanywa nekuda kwezvivi zvedu nekuda kwerudo rwevanhu uye zvakafanira kuti vatendi vese vave neruzivo urwu kuti vape kuzvipira mukunamatira pamberi paIshe.
Ndingagona kubatidza kenduru pandinonyengetera munyengetero kune dzinoyera kutsvene here?
Mhinduro ndeyekuti hongu, kana makenduru anogona kubhenekerwa kana uchinamata. Nekudaro, izvi hazvisi zvekumanikidza sezvo minamato ichigona kuitwa chero nguva nenzvimbo uye hatigone kubatidza kenduru kuti tinamate. Vatendi vazhinji vanowanzogadzira atari dzakakosha kuvasande vavo uko vane makenduru iwo mwenje panguva dzakatarwa sechipiriso chekunamatira.
Munyaya yeminamato Uye pane chiitiko chega cheMweya kutenda kwavo kwavakagadzirwa kwakanyanya kukosha nekuti ndipo pane iko kushanda kwavo kwakarara.
Izwi raIshe rinotidzidzisa kuti hatigone kumutsa minamato nepfungwa izere nekusahadzika kana kufunga kuti izvo zvatinokumbira zvakawoma nekuti ipapo munamato unozoita sekutambisa nguva kubva kwatisingazowane rubatsiro.
Ndinovimba makanakidzwa nemunamato kune Wakaropafadzwa Sacrament. Iva naMwari
Isimba munamato wekukomborera